Gacanta Oo Lagu Cuno Ayaa Ka Faa’ido Iyo Nadaafad Badan Qaandada..Waa Tan Sababta | Xaqiiqonews
Gacanta Oo Lagu Cuno Ayaa Ka Faa’ido Iyo Nadaafad Badan Qaandada..Waa Tan Sababta
Dhowr daraasadood oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cuntada oo lagu cunaa gacanta ay leedahay faaidooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay in ay ka qeyb qaadato soo deynta dhecaanada dheefshiidka.
Waa arin caan ah in neerfayaasha ku yaala dhammaadka faraheena ay ka qeyb qaataan kicinta dheecaanada dheefshiidka, in ls isticmaalo gacanta waxa ay kor u qaadi kartaa dareenka dhadhanka iyo macaansiga cuntada.
Dhamaadka faraheena waxaa laga helaa bikteeriyo loo yaqaan “Flora” taasi oo wax dhib ah aan ku sababeynin qofka, badalkeedana waxa ay naga ilaalisaa ilmaqatada kale ee dhibi karta caafimaadkeena sida uu oqray website-ka ” Tribune”.
Dhanka kale daraasad lagu baahiyey Majaladda “Abitite” ayaa sheegtay in gacanta oo wax lagu cunaa ay ka qeyba qaadan karto qofka in uu dareemo dharag marka loo barbardhig qaandada iyo farkeetada.
Marka la tixraaco macluumaadka “Abtitite” cuntada oo lagu cunaa gacmaha waxa ay ka qeyb qaadan kartaa dadaalka uu qofka ku doonaayo in uu miisaankiisa hoos u dhigo.
Yaa Nadaafad Badan Gacanta Iyo Qaanadada?
Waxaa jira aragti dad badani aaminsanyihiin oo dhaheysa in qaanadada ama farkeeto wax lagu cunaa nadaafad ayey leedahay, laakin tani sax ma ahan, gacmaheena waxa aan dhaqnaa dhowr mar maalintiiba, halka alaabtana la dhaqo hal mar oo kaliya.